Cunnooyinka loo yaqaan '5 Cuntada' si kor loogu qaado Waxqabadka Kelyaha - Hagaajinta Caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah »Cuntooyinka 5 si loo Hagaajiyo Waxqabadka Kelyaha - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Waqtiga xaadirka ah, cudur kili ah oo ba'an waa dhibaato caafimaad oo weyn. Taasi waa sababta aan halkan ugu soo bandhigeyno liis ah cuntooyinka kaa caawin kara hagaajinta howlahaaga kelyaha, oo ay ku jiraan miraha iyo khudaarta.
Waxaa lagu qiyaasaa in cudurada kelyaha ee soo noqnoqonaya ay laban laabaan tobanka sano ee soo socda Sababtoo ah gabowga sii kordhaya ee dadweynaha iyo kororka hababka kale ee daba-dheer sida sonkorowga ama cayilka.
Si aad u aragto: 5 noocyada cayilka iyo sababahooda
Miraha, khudradda iyo cuntooyinka ka caawiya hagaajinta hawlaha kelyaha waa tallaabooyinka ka hortagga kelyaha oo gacan ka geysan kara yaraynta horumarka cudurka iyo hagaajinta dhibaatooyinka wadnaha ee la xiriira cuduradan.
Kelyuhu waxay sameeyaan waxqabadyo muhiim ah oo wax ku ool ah oo ku jira habdhaqankayaga: hay'adahani waxay masuul ka yihiin baabi'inta qashinka. Dhiiga ka yimaada kelyaha ayaa la sifeeyaa iyaga oo haynaya walxaha si loo tirtiro. Intaa waxaa dheer, xubnahaasi waxay xakameynayaan cabitaanada iyo elektaroolitiyada jirka ku jira.
Marka qofku uu ka qabo cudur kelyo daran, macnaheedu waa in kelyihiisa ayan si sax ah u fulin hawlaha kala duwan ee ku xusan. Sababtan awgeed waa in bukaanku ay xakameyaan cuntadooda (dareeraha iyo alaabta cuntada).
Beddelidda cuntadaada si aad u hagaajisid hawlaha kelyaha maahan kaliya talo caafimaadTani waxay ka dhigan tahay qeyb muhiim ah oo ku saabsan daaweynta iyada oo lala kaashanayo dawada iyo sifeynta.
Nafaqo ku filan ayaa lagama maarmaan ah si loo saxo habka cudurka iyo in laga hortago dhacdooyinka cudurrada kale ee la xiriira hawlaha kalyaha sida sonkorowga, dhiig-karka ama cayilka.
Cunto qaadashada shaqsiyaadka qaba dhibaatooyinka kalyaha waa:
heerka tamarta ku haboon
Inta kale ee maqaalkani, waxaanu haynaa shan miro iyo khudrad oo naga caawiya hagaajinta shaqada kelyaha.
Mushaharka, oo sidoo kale loo yaqaano qoob-ka-soo-saarka, waa khudradda delicious waxayna u fiican tahay kuwa raba inay hagaajiyaan shaqadooda kelyaha. Sababta waa: Cuntadani waxay leedahay biyo sarreeya iyo qaadashada kalooriga yar.
Waxaa intaa dheer, biyaha waxay ka dhigan tahay 95% ka mid ah tiradooda, markaa xaqiiqda ah in ay tahay cunto fudud. Sidoo kale waa cunto raagaya sababtoo ah waxyaabaha ay ka kooban tahay fiber-ka.
Marka lagu daro badeecadeeda biyaha sare, dabeecadda ayaa si gaar ah hodan ku ah macdanta iyo fitamiinada. Kuwa ugu muhiimsan waa kalsiyum, fosfooraska, birta, potassium iyo sodium. Ilaa hadda sida fitamiinada ay walwalaan, escarole ayaa ku badan tayada fitamiin A, fitamiin C iyo fitamiinada kooxda B.
2. Basasha iyo dhagax
Khudaarta waxay ka mid yihiin cuntooyinka ugu badan ee lagu isticmaalo dhuunta adduunka oo idil. Layer ka dib lakabka, basasha iyo doot waxay leeyihiin faa'iidooyin badan.
Marka la eego hawlaha kelyaha, tani waa ficilkooda maqaarka oo xoog leh waa mid xiiso leh: cuntooyinkaasi waxay kor u qaadayaan ka saarista kaadida. Gaaban, basasha iyo dhagax ayaa leh awood xoog leh, oo ah sifo habboon oo ku saabsan caafimaadka kelyaha.
Daraasad cilmiyeed oo lagu daabacay bogga Wargeyska Cuntada Caafimaadka eegay tayada basasha sida hawlgalka firfircoon ee hawlaha kelyaha iyo joojinta cabitaanada ku jirta jirka.
Sida aan kor ku soo sheegnay, tallaabooyinkooda xasaasiga ahi maaha mid aan fiicnayn. Cuntooyinkaasi waxay leeyihiin faa'iidooyin kale oo badan. Waxay:
caawimo dagaal macaanka
hagaajinta nidaamka difaaca
waxay yareysaa qaar ka mid ah cudurada neefsashada
Karootada waa khudradda loo yaqaanno faa'idooyinka caafimaadka muuqaalka ah. Si kastaba ha noqotee, ma aha mid wanaaggiisa oo kaliya: karootiga wuxuu leeyahay hanti badan.
Marka la eego hawlaha kelyaha, khudraddani waa muhiim sababtoo ah awoodda duriinka. Sida cuntooyinka hore, la karooto wuxuu leeyahay badeeco sarreeya, kaas oo sahlaya sameynta iyo ka saaridda kaadida taas oo, markaa, waxay u oggolaaneysaa kala-soocidda dhagxaan kellida.
Iyo in aad ku noqoto caafimaadka muuqaal ah, waa mid aad uwanaagsan in dabacasaha uu yahay mid muhiim u ah aragga. Qodobkan qotada dheeriga ahi waa astaamaha karootiga: beta-carotenes oo ku jirta khudradan ayaa ah kuwa isbahaysiga awood leh sababtoo ah waxay ka hortagayaan da'da hore. Isticmaalka dabacasaha ayaa noo ogolaanaya inaan ilaalino raajada iyo ka hortagga muuqaalka cadka.
Marka laga reebo dhadhanka dhadhanka ah, blueberries waxaa ku jira firfircoonida antiseptic oo ku haboon mawduuca kaadida. ah blueberries ayaa markaa ku habboon in la dagaalamo caabuqyada iyo hagaajinta wareegga wareegga.
Casiirka Blueberry wuxuu leeyahay talaabo adag oo la yaab leh oo antiseptic iyo antibiyootiko ah oo ku saabsan bakteeriyada mas'uulka ka ah cudurada kaadi-mareenka, gaar ahaan bakteeriyada coli Escherichia.
Intaa waxaa dheer, blueberries waxaa ku jira qaarquinic acid, walax ka dhigaya kaadida marka la tirtiro. Aashitadani waxay noo ogolaanaysaa inaan iska ilaalino samaynta dhagxaan kellida oo sidaas awgeed looga hortago urolithiasis.
Gaaban, Blueberries waa miro fiican oo lagu hagaajinayo hawlaha kelyaha.
5. Cuntooyinka kale ee hagaajiya shaqada kelyaha
Miro iyo khudradda lagu xusay maqaalkani waa mid ka fog cuntooyinka kaliya ee lagu taliyey kuwa doonaya in ay hagaajiyaan shaqadooda kelyaha.
Waxaa jira dad kale oo badan oo leh hanti aad u fiican oo ku saabsan shaqada kalyaha, sida:
Maqaalkan ayaa sidoo kale laga yaabaa in aad xiiseyneyso: Xalalka basil iyo xajin si aad u daahiriso kelyahaaga si dabiici ah
Haddii aad qabtid nooc kasta oo ka mid ah dhibaatooyinka kelyahaHa ka waaban inaad la tashato takhtar ku kalsoon inuu ku siiyo daaweyn ku filan iyo cunto si loo saxo dhibaatada caafimaad.
7 raashin si ay u ilaaliyaan kelyaha iyo kaadiheysta
Kelyaha iyo kaadiheystu waa saldhigga nidaamka kaadida. Laakiin sidoo kale waxay sameeyaan, beerka, si loo baabi'iyo qashinka lagu kala shubo dhiigga. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/5-aliments-pour-ameliorer-la-fonction-renale/